မေးကြည့်ချင်တယ် (မေးကွညျ့ခငျြတယျ) | Myanmar Lifestyle Online Store
ပစ္စည်းတွေ အကြောင်း မေးချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မှာထားတဲ့ ပစ္စည်း မရောက်သေးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ မှာထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေရင် ဖြစ်ဖြစ် ၊ သုံးပုံသုံးနည်း သိချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဝန်ဆောင်မှုကို သဘောမကျလို့ ပြောချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြလို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ပစ္စည်းကြိုက်လို့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဝန်ဆောင်မှုကို သဘောကျလို့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ နောင်လည်း အားပေးဦးမယ် ဖြစ်ဖြစ် ၊ အားပေးစကား ပြောချင်ရင်လည်း ပြောလို့ ရပါတယ်… 😀 🙂
Phone နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ် ဆိုရင် 09 25 44 43 442 ကို ဆက်သွယ်လို့ ရသလို ၊ email ပို့ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း hello @ mmls . biz ကို ပို့လို့ ရပါတယ်။ ဒီ message box မှာ ပို့တဲ့ စာသားတွေ အတွက် Facebook Messenger ကို သုံးထားပြီး ၊ ကျွန်တော်တို့ reply ပြန်တာတွေက Facebook ရဲ့ message ကဏ္ဍ နဲ့ ၊ Messenger app မှာ ပြန်ပေါ်မှာပါဗျာ။ Myanmar Lifestyle ကို ဆက်သွယ်ပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ။
ပစ်စညျးတှေ အကွောငျး မေးခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ မှာထားတဲ့ ပစ်စညျး မရောကျသေးလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ မှာထားတဲ့ ပစ်စညျးနဲ့ ပတျသကျလို့ အဆငျမပွရေငျ ဖွဈဖွဈ ၊ သုံးပုံသုံးနညျး သိခငျြရငျ ဖွဈဖွဈ ၊ ဝနျဆောငျမှုကို သဘောမကလြို့ ပွောခငျြရငျ ဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောတို့ကို ပွောပွလို့ ရပါတယျ ခငျဗြာ။
ပစ်စညျးကွိုကျလို့ ဖွဈဖွဈ ၊ ဝနျဆောငျမှုကို သဘောကလြို့ ဖွဈဖွဈ ၊ နောငျလညျး အားပေးဦးမယျ ဖွဈဖွဈ ၊ အားပေးစကား ပွောခငျြရငျလညျး ပွောလို့ ရပါတယျ… 😀 🙂
Phone နဲ့ ဆကျသှယျခငျြတယျ ဆိုရငျ 09 25 44 43 442 ကို ဆကျသှယျလို့ ရသလို ၊ email ပို့ခငျြတယျ ဆိုရငျလညျး hello @ mmls . biz ကို ပို့လို့ ရပါတယျ။ ဒီ message box မှာ ပို့တဲ့ စာသားတှေ အတှကျ Facebook Messenger ကို သုံးထားပွီး ၊ ကြှနျတျောတို့ reply ပွနျတာတှကေ Facebook ရဲ့ message ကဏ်ဍ နဲ့ ၊ Messenger app မှာ ပွနျပျေါမှာပါဗြာ။ Myanmar Lifestyle ကို ဆကျသှယျပေးလို့ ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျဗြာ။
Call / Viber: